I-Sesame yeoyile eyi-160ml
Ioyile yeSesame sisixhobo esinamandla esibuyela umva kumawaka eminyaka kwaye siyaziwa ngokuba nakho ukukhulisa incasa kunye nezibonelelo zezempilo malunga naso nasiphi na isidlo. Ukongeza ekunikezeni ubutyebi bee-antioxidants kunye namafutha asempilweni, esi sithako sesondlo sikwabonakalisile ukuxhasa impilo yolusu, ukuphucula impilo yentliziyo, ukunciphisa ukudumba kunye nokuthomalalisa iintlungu ezingapheliyo. Ikwacebile ngeevithamini kunye nezinto ezibalulekileyo ezilandelelweyo ezifana ne-iron, i-zinc kunye nobhedu, kwaye umxholo wayo we-cholesterol usezantsi kakhulu kunamafutha ezilwanyana. Ioyile yesesame inexabiso elithile lezonyango, elinokulibazisa ukuguga, ukukhusela imithambo yegazi, ukumanzisa amathumbu kunye nokuzikhupha, ukunciphisa ityhefu yecuba notywala, nokukhusela isibindi.
Ingcaciso: 160ml * 12 iibhotile / CTNs
Ubomi beshelf: Iinyanga ezili-18
Ukugcina: Indawo epholile neyomileyo, kuthintela ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo.
Iziqinisekiso: HACCP, ISO9001: 2008
1. Isosi yeswekile enempilo nesulungekileyo, Akukho songezo
2. Ioyile yeSesame iqulethe iiasidi ezingafunyiswanga kunye neeamino acid, ikwindawo yokuqala phakathi kwazo zonke iintlobo zeoyile yemifuno.
Ingcebiso eshushu: Yinto yendalo ukuba imveliso iyajiya xa ibanda okanye idibane entlabathini ngokuthe ngcembe ukusuka ezantsi ukuya phezulu.
Imifuno ebandayo / isaladi
3.Vusa imifuno eqhotsiweyo
Umgaqo-nkqubo weesampulu: Iisampulu zasimahla ziyafumaneka, abathengi bahlala behlawula ukuthuthwa kwempahla.
Indlela yokuhlawula: T / T, L / C xa ubona, ezinye iindlela nceda unxibelelane nathi kuqala.
Ixesha lokukhokela: Ngokwesiqhelo iintsuku ezili-15- 25 emva kokuba i-odolo iqinisekisiwe, ii-odolo ze-OEM ziya kuba nde kancinci.
Egqithileyo Iviniga yaseRose
Okulandelayo: Iibhiskithi zesidlo sakusasa
Ioyile yeSesame yaseAsia
Ioyile yeSesame yamaTshayina
Ingqele ecinezelweyo yeSesame yeoyile
Ioyile yeSesame echanekileyo
Ukucokiswa kweoyile yeMbewu yeSesame
I-Sesame yeoyile ngobuninzi
I-Sesamum Indicum yeoyile
Isilayidi seBean esiQinisekisiweyo seBean
Isilayi esiColiweyo seBean esineziqholo
Umxube weSesame Tahini
Umtya weHawthorn, Iibhiskithi zaBantwana, Intonga yeBhontshisi entsha, Ukutya amandongomane anetyuwa, Ikhukhi yeLadyfinger, Iipakethi zesosi yeSoy,